Iindiza ezintsha ezisuka e-Ontario zisiya e-Austin kwi-Southwest Airlines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezintsha ezisuka e-Ontario zisiya e-Austin kwi-Southwest Airlines
Ukubhengezwa kweenqwelomoya ezintsha eziseMazantsi mpuma kuza njengoko i-ONT iqhubeka nokufumana ukubuyela kwimeko yesi sifo. Nge-Agasti, i-ONT ixele ukugcwala kwabahambi ngaphakathi kwe-7% yamanqanaba angaphambi kwe-COVID.
I-Southwest Airlines yazisa ngeenqwelomoya ezintsha ezivela eOntario International Airport ukuya eAustin, eTexas.
I-Southwest Airlines iya kubonelela mihla le nge-Ontario, California ukuya e-Austin, e-Texas iinqwelomoya eziqala ngoMatshi 10, 2022.
Isibhengezo esise Mzantsi-ntshona ziindaba ezamkelekileyo kwiSango laseMazantsi e-California kunye ne-Inland Empire.
Isibhengezo esivela kuMzantsi-ntshona weAirlines sokuba umphathi ophethe ixabiso eliphantsi uza kubhabha mihla le esuka eOntario International Airport (ONT) ukuya eAustin (AUS) ukuqala ngo-Matshi 2022 ziindaba ezamkelekileyo kwisango lase-Southern California kunye ne-Inland Empire.
Southwest Airlines izakunika iinqwelomoya phakathi NGAKHO kunye neAustin-Bergstrom International Airport mihla le kule shedyuli ilandelayo eqala ngoMatshi 10, 2022.
I-Flt # imvelaphi Indawo ukumka ukufika Ubuninzi inqwelo-moya
1204 NGAKHO AUS 10: 55 am 3: 35 pm Mvulo- Lwesihlanu &
474 NGAKHO AUS 9: 50 am 2: 30 pm Sat 737-700
1739 AUS NGAKHO 4: 35 pm 5: 55 pm Mvulo- Lwesihlanu &
257 AUS NGAKHO 2: 55 pm 4: 10 pm Sat 737-700
Iinqwelomoya ezintsha ziyafumaneka ngokubhukisha kwangoko
U-Alan D. Wapner, uMongameli weBhodi ye-OIAA yeKhomishina wathi: “Ukwangomnye umqondiso wokuba ukuchacha kwe-ONT kubhubhane we-COVID-19 kuyaqhubeka kwaye kuya kukhula ngamandla.”
Isikhululo senqwelomoya saseOntario (ONT) sesona sikhululo seenqwelomoya esikhula ngokukhawuleza e-United States, ngokweGlobal Traveler, upapasho oluphambili lwababhabha rhoqo. Ifumaneka kubukhosi be-Inland, i-ONT imalunga neekhilomitha ezingama-35 empuma yedolophu yaseLos Angeles embindini weSouthern California. Sisikhululo seenqwelomoya esigcwele-nkonzo, phambi kobhubhane we-coronavirus, sibonelela ngenkonzo ye-jet yorhwebo olungapheliyo kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-26 e-US, Mexico naseTaiwan.
I-Southwest Airlines Co, ebizwa ngokuba nguMzantsi-ntshona, yenye yeenqwelo moya ezinkulu eUnited States kunye nenqwelomoya yenqwelomoya enkulu enexabiso eliphantsi emhlabeni. Ikwikomkhulu eDallas, eTexas kwaye icwangcise inkonzo kwiindawo ezili-121 eUnited States nakwamanye amazwe alishumi.